Rakkoo sharafa alaa hir'isuuf, al ergii jajjabeessuu
Rakkoo sharafa alaa hir'isuuf, al ergii jajjabeessuu Featured
Obbo Tasfaayee Taklahaymanot nama waggoota 20 darbaniif hojii ala ergii irratti bobba'anii jiruufi jireenyasaanii gaggeeffachaa jiran yemmuu ta'u, gama biraatiin immoo hojiiwwan qonnaa guguddaa irratti bobba'aniiru.
Buna, saliixaafi mi'eessitoota akaakuuwwan gara garaa alatti erguudhaan waggoota dheeraaf fayyadamaa kan turan Obbo Tasfaayeen, kanaanis lafa qonnaa bal'aa bitachuudhaan ofiisaaniitii saliixa omishaa gara alaatti ergaa turaniiru.
Hojiin isaan irratti bobba'an kun waggoota lamaan kana keessatti kisaaraa cimaaf kan isaan saaxilaa jiru yemmuu ta'u, waggootuma lamaan darbanitti doolaara Ameerikaa miiliyoona 46 ta'u kasaaruu dubbatu.
Keessattuu gatiin salixiifi bunaa biyya keessatti ittiin bitamaa jiru biyyoota birootiin yemmuu wal bira qabamu olaanaa ta'uu kan himan Obbo Tasfaayeen, gatii mi'aa kanarraa kan fayyadamaa jiru garuu qonnaan bulaa osoo hintaane faddaaltota gidduu qonnaan bulaa jiran ta'uu ibsu.
Sababa kanaan omishni ala ergii hir'achaa jiraachuusaatiin rakkoon sharafa alaa immoo hammaataa kan jiru ta'uus ni himu.
Rakkoon kun akka hiikkamuuf qaama mootummaatti iyyatanus hanga ammaatti deebiin isaan argatan kan hin jirre ta'uu himanii, kun immoo expoortaroota qofaa osoo hin taane yeroo ammaa mootummaas miidhaa kan jiru ta'uu ibsu.
Al ergiin baranaa isa bara darbeetiin yemmuu madaalamu caalmaa qabaachuu kan himan immoo Ministira Daldalaa, Obbo Malaakuu Allabali. isaanis haalli waggoota muraasaan as jiru hir'achaa dhufuu al ergii kan agarsiisu ta'uu dubbatu.
Hir'achaa dhufuu al ergiitiin walqabatee hanqinni sharafa alaas dabalaa dhufuusaafi kun immoo al ergitootni hedduu kisaaraadhaan hojii gadi lakkisaa jiraachuunsaaniis hidhata qabaachuu ibsu.
Mi'eessitootni, buni, saliixniifi sanyiiwwan quyyisaa biyyattiin gara alaatti ergitu gabaa addunyaa irratti hedduu kan barbaadaman ta'uu kan eeran Obbo Malaakuun, dhiheessiin jiru garuu hedduu gadi bu'aa kan jiru ta'uu dubbatu.
Kanaaf immoo faddaaltootni al ergitootaafi qonnaan bultoota gidduu jiran gatii qaalessaa jiraachuu komii al ergitootaa irraa dhagahamaa jiru dhugaa ta'us, wanti kun kan uumamu naannoo Dhaabbata Gabaa Omishaatti waan ta'eef kan qulqullaa'uu qabu akka ta'e dubbatu.
Falli jiru garuu qonnaan bultootni heddumminaan akka omishan gargaaruufi faddaaltota gidduu jiran to'achuu yemmuu ta'u, ministeerichi dhimma kana yeroo gabaabaa keessatti furuuf hojjachaa jiraachuus ni himu.
Al ergiin biyyattii inni baranaa doolaara biiliyoona sadii yemmuu ta'u, kan gara biyyaatti galfattu garuu doolaara biiliyoona 14 ta'uun ni yaadatama.
Torban kana/This_Week 4823
Guyyaa mara/All_Days 1642418